ဆံပငျကြှတျသူ ၊ ဆံပငျနကျခငျြသူမြားအတှကျ အထိရောကျဆုံးနညျးလေးပါ - Barnyar Barnyar
March 25, 2022 အလှအပရေးရာ 0
ဆံပငျကြှတျသူ ၊ ဆံပငျနကျခငျြသူမြားအတှကျ
ဒီနညျးလေးက ယုမှနျကိုယျတိုငျ စမျးသပျထားပွီး တကယျထူးခွားလို့ တငျပေးဖွဈတာပါ…. ၄ ခေါကျလောကျ အသုံးပွုရုံနဲ့ ဆံပငျ ၉၅% အကြှတျသကျသာ မဲနကျ သနျစှမျးစပေါတယျ
ယုမှနျအရငျက အစာအိမျရောဂါ အခွနေဆေိုးလို့ ၂နှဈလောကျ နနှငျးနစေ့ဉျ ၁၀လုံး သောကျရပါတယျ … အဲ့ကထဲက ရှိသမြှ ဆံပငျတှေ ကြှတျတာ ထိပျပါ ပွောငျတဲ့ အထိပါ…
ဆေးနညျးပေါငျးစုံ ကုခဲ့ပမေဲ့ အဆငျမပွခေဲ့ပါဘူး … ထိပျပါပွောငျပွီး ဆံပငျတအားကြှတျလို့ အစခံရတဲ့ အထိပါ
ခုဒီနညျးလေးကို စမျးသပျတာ ၄ခါမွောကျမှာတငျ ခေါငျးလြှျောရငျ ဆံပငျ ၁၀၀ ကြျော ကြှတျတဲ့သူက ၅ပငျလောကျပဲ ကြှတျတော့ပါတယျ အစက တျောတျောကို အံ့ဩခဲ့တာပါ
အဲ့လိုရလဒျ ရလာလိမျ့မယျလို့တောငျ ထငျမထားပါဘူး.. ပွီးတော့ မကျြခုံးကိုပါ လိမျးတာ မကျြခုံးမှေးတှပေါ ပေါကျလာပွီး ထူထဲလာပါတယျ.. ရရှေညျစှဲလုပျရငျ ဆံပငျပေါကျ လာနိုငျပါတယျ ယုမှနျကတော့ ဆံပငျအသဈလေးတှေ ပွနျပေါကျလာပါပွီ
၁.. ထောလပတျရှကျ, ၂.. သံလှငျဆီရယျပါ
ထောလပတျရှကျ အရှကျ ၂၀ (သို့) အရှကျ ၃၀ခနျ့ကို ရဆေေးပွီး အနံ့မပါတဲ့ Tissueနဲ့ ရစေငျကွယျအောငျ သုတျပေးပါ… ပွီးရငျ ဇကာ (သို့) ဗနျးအလှတျ တဈခုထဲကို တဈခုနဲ့ တဈခု အရှကျတှေ ထပျမနအေောငျ တဈရှကျခငျြးဆီ ဖွနျ့ခထြားပေးပါ
လဝေငျလထှေကျ ကောငျးမှနျပွီး နရေောငျခွညျနဲ့ မထိတှတေဲ့ နရောမှာ အရှကျတှေ ခွောကျအောငျ လှမျးပေးပါ..
(PS နပေူထဲ လုံးဝမလှနျးရပါ… နရေောငျခွညျနဲ့ တိုကျရိုကျထိတှရေ့ငျ အရှကျရဲ့ အာနိသငျ ပကျြပွယျတတျပါသညျ… လဝေငျလထှေကျ မကောငျးတဲ့နရော လှနျးလြှငျလညျး အရှကျမှိုတတျတကျပါသညျ)
ဒါ့ကွောငျ့ လဝေငျလထှေကျ ကောငျးပွီး နမေပူသော နရောတှငျ လှနျးရပါမညျ
အရှကျတှကေို ၇ရကျ (သို့) ၁၀ရကျ ခလြေို့ရပွီး ကွှတျဆတျနသေညျ အထိ လှမျးရပါမညျ… (မှိုတတျနလြှေငျ လုံးဝ မသုံးပါနှငျ့ အထူးသတိထားပါ)
ခွောကျသှားပွီး ခလြေို့ရသညျ့အနေ ရောကျရငျ ဖနျပုလငျး အလှတျတဈခုထဲသို့ အရှကျတှကေို မှသှားအောငျ ခပြွေီးထညျ့ပါ.. (ပလကျစတဈဗူး အသုံးမပွုရပါ)
ပွီးရငျ သံလှငျဆီကို အရှကျတှေ မွုပျရုံသာမက အရှကျအပျေါ လကျသုံးလူံးလောကျထိ မွုပျအောငျ ထညျ့ပေးပါ
ပွီးရငျ အဖုံးကိုပိတျပွီး ရောနှောသှားစရေနျ ၂မိနဈခနျ့ လှုပျရမျးပေးပါ… အာနိသငျ ထိရောကျစရေနျ ၁ပါတျခနျ့ စိမျထားပွီးမှ အသုံးပွုပေးပါ (အသုံးပွုပွီးတိုငျး ပုလငျးအဖုံးကို သခြောလလေုံအောငျ ပိတျပါ)
တဈခါ ပွုလုပျထားလြှငျ ၇လ အသုံးပွုနိုငျပါသညျ .. သံလှငျဆီကုနျလြှငျ ထပျထညျ့ပွီး အသုံးပွုနိုငျပါတယျ..
ခေါငျးမလြှျောခငျ ယုမှနျတို့ လုပျထားတဲ့ အရညျလေးကို ဦးရေ အနှံ့သခြောလိမျး ပွီး ၁နာရီလောကျ ထားပွီးမှ ခေါငျးလြှျောခပြါ။ ခေါငျးလြှျောပွီး ဆံပငျပေါငျးဆေး သုံးမယျဆိုရငျလညျး ပေါငျးဆေးကို ဦးရမေထိရပါ…
ဆံပငျအဖြားနားကိုဘဲ ပေါငျးပေးရပါမယျ… ပေါငျးဆေးက ဦးရထေိရငျ ဆံပငျကြှတျပါတယျ… (အရညျဘဲ လိမျးရပါမယျ. ထောလပတျရှကျဖကျတှေ လိမျးစရာမလိုပါ… အာနိသငျက အရညျထဲကို ဝငျရောကျပွီး ဖွဈပါသညျ)
၁ပါတျ ၂ကွိမျအသုံးပွုပေးပါ…… ၄ကွိမျမွောကျမှာ သိသာတဲ့ရလဒျကို တှရေ့မှာပါ
ဆံပငျအတှကျသာမက မကျြခုံးကိုလညျး ညအိပျယာဝငျတိုငျး လိမျးပေးပါ မကျြခုံးမှေးမြား ထူထဲနကျမှောငျပွီး ပေါကျလာပါလိမျ့မယျ… ကြား ၊မ… မရှေးအသုံးပွုလို့ ရပါတယျရှငျ
ဆံပင်ကျွတ်သူ ၊ ဆံပင်နက်ချင်သူများအတွက် အထိရောက်ဆုံးနည်းလေးပါ
ဒီနည်းလေးက ယုမွန်ကိုယ်တိုင် စမ်းသပ်ထားပြီး တကယ်ထူးခြားလို့ တင်ပေးဖြစ်တာပါ…. ၄ ခေါက်လောက် အသုံးပြုရုံနဲ့ ဆံပင် ၉၅% အကျွတ်သက်သာ မဲနက် သန်စွမ်းစေပါတယ်
ယုမွန်အရင်က အစာအိမ်ရောဂါ အခြေနေဆိုးလို့ ၂နှစ်လောက် နနွင်းနေ့စဉ် ၁၀လုံး သောက်ရပါတယ် … အဲ့ကထဲက ရှိသမျှ ဆံပင်တွေ ကျွတ်တာ ထိပ်ပါ ပြောင်တဲ့ အထိပါ…
ဆေးနည်းပေါင်းစုံ ကုခဲ့ပေမဲ့ အဆင်မပြေခဲ့ပါဘူး … ထိပ်ပါပြောင်ပြီး ဆံပင်တအားကျွတ်လို့ အစခံရတဲ့ အထိပါ
ခုဒီနည်းလေးကို စမ်းသပ်တာ ၄ခါမြောက်မှာတင် ခေါင်းလျှော်ရင် ဆံပင် ၁၀၀ ကျော် ကျွတ်တဲ့သူက ၅ပင်လောက်ပဲ ကျွတ်တော့ပါတယ် အစက တော်တော်ကို အံ့ဩခဲ့တာပါ
အဲ့လိုရလဒ် ရလာလိမ့်မယ်လို့တောင် ထင်မထားပါဘူး.. ပြီးတော့ မျက်ခုံးကိုပါ လိမ်းတာ မျက်ခုံးမွှေးတွေပါ ပေါက်လာပြီး ထူထဲလာပါတယ်.. ရေရှည်စွဲလုပ်ရင် ဆံပင်ပေါက် လာနိုင်ပါတယ် ယုမွန်ကတော့ ဆံပင်အသစ်လေးတွေ ပြန်ပေါက်လာပါပြီ
၁.. ထောလပတ်ရွက်, ၂.. သံလွင်ဆီရယ်ပါ
ထောလပတ်ရွက် အရွက် ၂၀ (သို့) အရွက် ၃၀ခန့်ကို ရေဆေးပြီး အနံ့မပါတဲ့ Tissueနဲ့ ရေစင်ကြယ်အောင် သုတ်ပေးပါ… ပြီးရင် ဇကာ (သို့) ဗန်းအလွတ် တစ်ခုထဲကို တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု အရွက်တွေ ထပ်မနေအောင် တစ်ရွက်ချင်းဆီ ဖြန့်ချထားပေးပါ
လေဝင်လေထွက် ကောင်းမွန်ပြီး နေရောင်ခြည်နဲ့ မထိတွေ့တဲ့ နေရာမှာ အရွက်တွေ ခြောက်အောင် လှမ်းပေးပါ..
(PS နေပူထဲ လုံးဝမလှန်းရပါ… နေရောင်ခြည်နဲ့ တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ရင် အရွက်ရဲ့ အာနိသင် ပျက်ပြယ်တတ်ပါသည်… လေဝင်လေထွက် မကောင်းတဲ့နေရာ လှန်းလျှင်လည်း အရွက်မှိုတတ်တက်ပါသည်)
ဒါ့ကြောင့် လေဝင်လေထွက် ကောင်းပြီး နေမပူသော နေရာတွင် လှန်းရပါမည်
အရွက်တွေကို ၇ရက် (သို့) ၁၀ရက် ချေလို့ရပြီး ကြွတ်ဆတ်နေသည် အထိ လှမ်းရပါမည်… (မှိုတတ်နေလျှင် လုံးဝ မသုံးပါနှင့် အထူးသတိထားပါ)
ခြောက်သွားပြီး ချေလို့ရသည့်အနေ ရောက်ရင် ဖန်ပုလင်း အလွတ်တစ်ခုထဲသို့ အရွက်တွေကို မွသွားအောင် ချေပြီးထည့်ပါ.. (ပလက်စတစ်ဗူး အသုံးမပြုရပါ)
ပြီးရင် သံလွင်ဆီကို အရွက်တွေ မြုပ်ရုံသာမက အရွက်အပေါ် လက်သုံးလူံးလောက်ထိ မြုပ်အောင် ထည့်ပေးပါ
ပြီးရင် အဖုံးကိုပိတ်ပြီး ရောနှောသွားစေရန် ၂မိနစ်ခန့် လှုပ်ရမ်းပေးပါ… အာနိသင် ထိရောက်စေရန် ၁ပါတ်ခန့် စိမ်ထားပြီးမှ အသုံးပြုပေးပါ (အသုံးပြုပြီးတိုင်း ပုလင်းအဖုံးကို သေချာလေလုံအောင် ပိတ်ပါ)
တစ်ခါ ပြုလုပ်ထားလျှင် ၇လ အသုံးပြုနိုင်ပါသည် .. သံလွင်ဆီကုန်လျှင် ထပ်ထည့်ပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်..
ခေါင်းမလျှော်ခင် ယုမွန်တို့ လုပ်ထားတဲ့ အရည်လေးကို ဦးရေ အနှံ့သေချာလိမ်း ပြီး ၁နာရီလောက် ထားပြီးမှ ခေါင်းလျှော်ချပါ။ ခေါင်းလျှော်ပြီး ဆံပင်ပေါင်းဆေး သုံးမယ်ဆိုရင်လည်း ပေါင်းဆေးကို ဦးရေမထိရပါ…
ဆံပင်အဖျားနားကိုဘဲ ပေါင်းပေးရပါမယ်… ပေါင်းဆေးက ဦးရေထိရင် ဆံပင်ကျွတ်ပါတယ်… (အရည်ဘဲ လိမ်းရပါမယ်. ထောလပတ်ရွက်ဖက်တွေ လိမ်းစရာမလိုပါ… အာနိသင်က အရည်ထဲကို ဝင်ရောက်ပြီး ဖြစ်ပါသည်)
၁ပါတ် ၂ကြိမ်အသုံးပြုပေးပါ…… ၄ကြိမ်မြောက်မှာ သိသာတဲ့ရလဒ်ကို တွေ့ရမှာပါ
ဆံပင်အတွက်သာမက မျက်ခုံးကိုလည်း ညအိပ်ယာဝင်တိုင်း လိမ်းပေးပါ မျက်ခုံးမွှေးများ ထူထဲနက်မှောင်ပြီး ပေါက်လာပါလိမ့်မယ်… ကျား ၊မ… မရွေးအသုံးပြုလို့ ရပါတယ်ရှင်
ကြက်သူခိုး လိုက်ဖမ်းသူနဲ့ ကလေးအိပ်တုန်း ခိုးစားကြရအောင်ဆိုတဲ့ လင်မယား တွေ့ကြသောအခါ
Total Hits : 336169